ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကြောင့် ပုရိဿတွေကြားထဲ နာမည်ကြီးနေတဲ့ မြန်မာဆယ်လီများ - Grand Parents-Day
Home / Celebrity / ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကြောင့် ပုရိဿတွေကြားထဲ နာမည်ကြီးနေတဲ့ မြန်မာဆယ်လီများ
ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကြောင့် ပုရိဿတွေကြားထဲ နာမည်ကြီးနေတဲ့ မြန်မာဆယ်လီများ
Body ကောက်ကြောင်းလှတဲ့ ဆယ်လီအမျိုးသမီးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲကမှ ပုရိသတွေကြားမှာ အရမ်းကို နာမည်ကြီးတဲ့ ဆယ်လီမမတွေ ရှိပါတယ်။ ကိုကိုမောင်မောင်တွေ ကြားမှာ အရမ်းကိုလှတဲ့ ကောက်ကြောင်းပိုင်ရှင်aတွ အဖြစ် နာမည်ကြီးနေသူလေးတွေ ဘယ်သူတွေ ဖြစ်မလဲ..? အမျိုးသားထုတွေကြားမှာ ကောက်ကြောင်းလှတဲ့ မမတွေ အဖြစ် နာမည်ကြီးနေသူတွေကတော့…………….
နန်းသီရိမောင်ကတော့ ပုရိသတွေကြားမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ အဆိုတော်၊ မော်ဒယ်မလေးပါ။ ပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ ကိတ်တဲ့ Body လှလှလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။
နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ မော်ဒယ်မင်းသမီးလေး ဘေဘီမောင်ပါ။ သူမကလည်း မိန်းကလေးဆန်ပြီး လှပတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ မြန်မာဝတ်စုံပဲ ၀တ်ဝတ်၊ ခေတ်ဆန်တဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေကိုပဲ ၀တ်ဝတ် လိုက်ဖက်တဲ့ Body အလှပိုင်ရှင်ပါ။
မေပန်းချီကတော့ အမျိုးသားပရိသတ်တွေကြားမှာ ကိတ်တဲ့ Body အမိုက်စားကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆယ်လီမမအဖြစ်နဲ့ နာမည်ကြီးသူပါ။
နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ အဆိုတော် မင်းသမီး ၀ါဆိုမိုးဦးပါ။ လှပပြီး ကျစ်လစ်တဲ့ Body အချိုးအစားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ မိန်းကလေးချင်းတောင် အားကျရတဲ့ အချိုးအဆစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ အရမ်းကို လိုက်ဖက်တဲ့ body အချိုးအစားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးကတော့ ပါးချိုင့်မင်းသမီးလေး အေးမြတ်သူပါ။ အေးမြတ်သူကတော့ လှပပြီး ကျစ်လစ်တဲ့ အချိုးအစားကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
လုလုအောင်ကတော့ ခေးကြီးလုဆိုပြီး ပုရိသတွေကြားမှာ နာမည်ကြီးပါတယ်။
သူမကတော့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကြောင့် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးလာသူပါ။ လှပတဲ့ Body အချိုးအစားပိုင်ရှင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံထားရသူပါ။
သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ အမိုက်စားပုံတွေကို သူမရဲ့ fb မှာ မကြာခဏ တင်လေ့ရှိသူပါ။ ကျန်းမာကျစ်လစ်ပြီး လှပတဲ့ ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။
အိချောပိုကတော့ သူမရဲ့ လှပတဲ့ Body အချိုးအစားကြောင့်် နာမည်ကြီးသူပါ။